Oklahoma ပဈခတျမှု လေးဦးသဆေုံး
၀၂ ဇွန်၊ ၂၀၂၂
Oklahoma ပြည်နယ်က ပစ်ခတ်မှုမြင်ကွင်း။
အမေရိကန်နိုင်ငံ Oklahoma ပြည်နယ်မှာ ပစ်ခတ်မူဖြစ်ပြီး လူ ၄ ဦး သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ ရဲတွေက ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ Oklahoma ပြည်နယ် Tulsa မြို.ကြီးက ဆေးရုံဝန်းထဲ မနေ့ညနေတုံးက သေနပ်သမားတစ်ဦး ပစ်ခတ်မူကြောင့် နောက်ထပ် ၁၀ ဦးခန့် ဒဏ်ရာတွေရခဲ့သေးတယ်လို့ ရဲတွေက ဆက်ပြောပါတယ်။
Saint Francis ဆေးရုံ ပြင်ပလူနာဌာန အဆောက်အဦးထဲမှာ အခုလို ပစ်ခတ်ဖို့ သံသယရှိဖွယ် သေနပ်သမား လူပ်ရှားမူကို မနေ့ ညနေမှာ စတွေ့တွေ့ချင်း မီးနစ်ပိုင်းထဲမှာပဲ ရဲတွေက သူနဲ့ အဆက်အသွယ် ရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ရဲ ပြောခွင့်ရှိသူက ရှင်းပြပါတယ်။
Tulsa မြို. ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒု ရဲမူးကြီး Eric Dalgleish က သုံးမီးနစ်အတွင်း ချက်ချင်းတုံ့ပြန်နိုင်ပြီး၊ ညနေ ၅ နာရီ တစ်မီးနစ်မှာ သံသယရှိတဲ့ သေနပ်သမားနဲ့ရော၊ အထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေနဲ့ပါ အဆက်အသွယ်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လူတွေ ဒုတိယထပ်ကို ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး၊ အဆောက်အဦးထဲက ပစ်ခတ်သံတွေကိုရဲတွေ ကြားခဲ့ရချိန်မှာ အဲ့ဒိကို ချက်ချင်း တက်သွားခဲ့တယ်လို့ ဒုရဲမူးကြီး Dalgleish က ဆက်ရှင်းပြပါတယ်။
ရဲတွေ အထဲရောက်သွားချိန်မှာတော့ ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ သေနပ်သမားအဖြစ် သံသယရှိသူလည်း သေဆုံးနေပြီး၊ သူ့ကိုယ်သူ ပြန်ပစ်သတ်ခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဒုရဲမူးကြီး Dalgleish က ဆက်ပြောခဲ့ပေမဲ့ သူဘယ်သူဆိုတာကို ထုတ်မပြောသေးပါဘူး။
အရွယ်ရောက်သူ အမျိုးသားဖြစ်တဲ့ သံသယ သေနပ်သမားအနေနဲ့ ဘာကြောင့် ပစ္စတိုနဲ့ ရိုင်ဖယ်ဝှေ.ယမ်းပြီး ခွဲစိတ်နဲ့ ရင်သားကျန်းမာရေး ပြင်ပလူနာဌာနရှိရာ Natalie အဆောက်အဦးထဲမှာ ပစ်ခတ်ခဲ့တာကိုလည်း မရှင်းလင်းသေးဘူးလို့ ရဲတွေကဆိုနေပါတယ်။
သေဆုံး ဒဏ်ရာခဲ့ရသူတွေကတော့ ဆေးရုံ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပတ်သက်သူတွေ ဖြစ်နေပြီး၊ ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားတဲ့အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အမည်တွေကို ထုတ်ပြန်မှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့လည်း Saint Francis ဆေးရုံက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အမရေိကနျနိုငျငံ Oklahoma ပွညျနယျမှာ ပဈခတျမူဖွဈပွီး လူ ၄ ဦး သဆေုံးခဲ့ရတယျလို့ ရဲတှကေ ဆိုပါတယျ။
နိုငျငံတောငျပိုငျးရှိ Oklahoma ပွညျနယျ Tulsa မွို.ကွီးက ဆေးရုံဝနျးထဲ မနညေ့နတေုံးက သနေပျသမားတဈဦး ပဈခတျမူကွောငျ့ နောကျထပျ ၁၀ ဦးခနျ့ ဒဏျရာတှရေခဲ့သေးတယျလို့ ရဲတှကေ ဆကျပွောပါတယျ။
Saint Francis ဆေးရုံ ပွငျပလူနာဌာန အဆောကျအဦးထဲမှာ အခုလို ပဈခတျဖို့ သံသယရှိဖှယျ သနေပျသမား လူပျရှားမူကို မနေ့ ညနမှော စတှတှေ့ခေ့ငျြး မီးနဈပိုငျးထဲမှာပဲ ရဲတှကေ သူနဲ့ အဆကျအသှယျ ရအောငျလုပျခဲ့တယျလို့ ရဲ ပွောခှငျ့ရှိသူက ရှငျးပွပါတယျ။
Tulsa မွို. ရဲတပျဖှဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒု ရဲမူးကွီး Eric Dalgleish က သုံးမီးနဈအတှငျး ခကျြခငျြးတုံ့ပွနျနိုငျပွီး၊ ညနေ ၅ နာရီ တဈမီးနဈမှာ သံသယရှိတဲ့ သနေပျသမားနဲ့ရော၊ အထဲမှာပိတျမိနသေူတှနေဲ့ပါ အဆကျအသှယျရခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
လူတှေ ဒုတိယထပျကို ထှကျပွေးခဲ့ပွီး၊ အဆောကျအဦးထဲက ပဈခတျသံတှကေိုရဲတှေ ကွားခဲ့ရခြိနျမှာ အဲ့ဒိကို ခကျြခငျြး တကျသှားခဲ့တယျလို့ ဒုရဲမူးကွီး Dalgleish က ဆကျရှငျးပွပါတယျ။
ရဲတှေ အထဲရောကျသှားခြိနျမှာတော့ ပဈခတျခဲ့တဲ့ သနေပျသမားအဖွဈ သံသယရှိသူလညျး သဆေုံးနပွေီး၊ သူ့ကိုယျသူ ပွနျပဈသတျခဲ့တာ ဖွဈနိုငျတယျလို့ ဒုရဲမူးကွီး Dalgleish က ဆကျပွောခဲ့ပမေဲ့ သူဘယျသူဆိုတာကို ထုတျမပွောသေးပါဘူး။
အရှယျရောကျသူ အမြိုးသားဖွဈတဲ့ သံသယ သနေပျသမားအနနေဲ့ ဘာကွောငျ့ ပစ်စတိုနဲ့ ရိုငျဖယျဝှေ.ယမျးပွီး ခှဲစိတျနဲ့ ရငျသားကနျြးမာရေး ပွငျပလူနာဌာနရှိရာ Natalie အဆောကျအဦးထဲမှာ ပဈခတျခဲ့တာကိုလညျး မရှငျးလငျးသေးဘူးလို့ ရဲတှကေဆိုနပေါတယျ။
သဆေုံး ဒဏျရာခဲ့ရသူတှကေတော့ ဆေးရုံ မိသားစုဝငျတှနေဲ့ ပတျသကျသူတှေ ဖွဈနပွေီး၊ ဂုဏျသိက်ခာကို လေးစားတဲ့အနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ အမညျတှကေို ထုတျပွနျမှာ မဟုတျသေးဘူးလို့လညျး Saint Francis ဆေးရုံက ကွညောခကျြထုတျပွနျထားပါတယျ။
အမေရိကန် ကလေးကျောင်းပစ်ခတ်မှု အများအပြားသေဆုံး နှင့် “တပတ်အတွင်း ကမ္ဘာ့သတင်း”
သေနတ်ကိုင်ဆောင်မှု ထိန်းချုပ်ရေး အမေရိကန် လွှတ်တော်မဲခွဲမည်
Tulsa သတ်ဖြတ်မှု နှစ်ရာပြည့် သမ္မတ Biden တက်ရောက်
တက္ကဆက် ပစ်ခတ်မှုမှာ သေဆုံးသူ မူလတန်း ကျောင်းသူ ၂ ယောက် ဈာပန စတင်ကျင်းပ
Texas ပြည်နယ် ကျောင်းတွင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့နေရာ သမ္မတ Biden သွားရောက်
တက္ကဆက်မူလတန်းကျောင်း ပစ်ခတ်မှုမှာ သေဆုံးသူတွေအတွက် အောက်မေ့ဖွယ်ကျင်းပ
အမေရိကန် Sacramento မြို့ ပစ်ခတ်မှု ၆ ဦးသေဆုံး
ရုရှားတက္ကသိုလ် ပစ်ခတ်မှု ၆ ဦးသေဆုံး